ဒီရက်ပိုင်း ကျနော်က ကိုယ့်ကိုကိုယ်မြေမျြပ်သင်္ဂြိုလ်ထားတဲ့သူလို.။ဘ၀ရဲ့ အဓိပါယ်တွေ၊အတွေးအခေါ်တွေ
တမျှော်ကြီး ပုံဖော်ကြည့်ဖို့လည်းမရှိတော့ပါဘူး။ပစ္စုပန်ကိုတည့်တည့်ရူ့ရင်း တစ်ရက်ပြီးတစ်ရက်
အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆို ကျနော်ဟာ အိမ်မက်ရှည်တွေတလှေကြီးနဲ့ လှော်နေခတ်နေတဲ့
လှေရှင်ဗျာ..။လှေဦးမှာဖန်မီးအိမ်ဆိုတာလည်း မဆိုသလောက် အလင်းမူန်ဖြန့်ကျဲထားတယ်...။
အင်းလေးမှာရွှာတဲ့မိုး..သီချင်းလေးညည်းရတာသိပ်အရသာတွေ့ချိန်ပေါ့..။တချတ်တချတ် လူးလူးသွားတဲ့လှေကိုပဲမယိမ်းအောင်မမှောက်အောင်ထိန်းရတာနဲ့ ခရီးကသိပ်မတွင်ခဲ့ပါဘူး..။
ရေမျက်နှာပြင်ဆီကလွှင့်ခက်လာတဲ့ လေပြင်းဆိုတာကလည်း သိပ်အေး၊ နှင်းမူန် မြူမုန် ရေခိုးရေ ငွေ့ကလျံလျံနဲ့ရှေးဆီကို သိပ်မမြင်ရပါဘူးဗျာ..။လှေတတ်နဲ့ခတ်စဉ်လွှင့်လာတဲ့ရေသံနဲ့လှေဦးကရေခွဲသံကလွဲပတ်ဝန်းကျင်ကလည်း တိတ်ဆိတ်ရချည့်။အဖော်ဆိုတာ လှေဦးက ဖန်မီးအိမ်အလဲ့လဲ့
ကလေးသာ။သိပ်ခတ်တဲ့ခရီးများလာဗျာ..။ဘယ်လောက်ပဲခတ်ပါစေလေ ဒီလှေလေးကမ်းမကပ်သ၍ကျနော်ကလှော်နေခတ်ဦးမှာပဲ..။ဒါကကျနော် တာဝန်ပဲလေ..ကျနော်လက်မောင်းသားတွေ
ပြုတ်ထွက်သွားရမယ်ဆိုရင်တောင်ကျနော်ကလှေနေရဦးမှာကလား။ကျနော်ရည်ရွှယ်ရာ ဖန်မီးအိမ်လေးမငြိမ်းသ၍ပေါ့လေ။ နောက်ပြီး ကျနော်စိတ်ထဲရင်ထဲတနုန့်နုန့်ခံစားရတဲ့ဝေဒနာတချို့လည်းရှိတယ်။ထိုအကြောင်းများစတွေးနေပြီဆို ကျနော်မျက်ဝန်းဟာ မိုးဖွဲလေးလို စွေလို့၊ဘယ်လိုခြေနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျနော်ကတော့ အပြုံးလေးနဲ့ အဆုံးသတ်ပေးလိုက်တာပဲ..။ဘာလို့လည်းဆိုတော့ကျနော်စိတ်ထဲမှာအမြဲ အကောင်းမြင်စိတ်ကလေးမွေထားတယ်။အမြဲဆိုလို ကိစ္စတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။
အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျနော်သိပ်ကြိုတ်တဲ့ ဘာသာပြန်ဝတ္တုတိုလေးတစ်ပုဒ်
ဂျယ်ရီဟာ လူတိုင်းရဲ့ နှစ်သက်မှုကို ရရှိတဲ့ လူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အမြဲပဲ အကောင်းမြင်စိတ်ရှိပြီး အရာရာတိုင်းကို အပြုသဘောနဲ့ပြောဆိုနိုင်သူတစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာ့ကြောင့် သူဒီလို အကောင်းမြင်စိတ် အမြဲရှိနိုင်ပါသလဲလို့များ တစ်ယောက်ယောက်က သူ့ကိုမေးလာခဲ့ရင်တော့ ....
“ ကျွန်တော်များ ဒီထက် ပိုကောင်းနိုင်မယ် ဆိုရင်ဗျာ ဖြစ်နိုင်ရင် နှစ်ကိုယ်တောင် ခွဲပြီး လူတွေကို အားပေးနှစ်သိမ့်မှုများ ပြုချင်ပါရဲ့” လို့ ပြောလေ့ရှိပါသေးတယ်။
ဂျယ်ရီဟာ စားသောက်ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှ မန်နေဂျာတစ်ဦးဖြစ်ပြီး သူ့လက်အောက်မှာ များစွာသော စားပွဲထိုးတွေဟာ ပျော်ရွှင်ချစ်ခင်စွာ စည်းစည်းလုံးလုံး အလုပ်လုပ်ကြပါတယ်။ သူနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတဲ့ သူတွေ ဒီလို ပျော်ရွှင်ရခြင်းရဲ့ အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ သူ့ရဲ့ မြင့်မြတ်တဲ့ စိတ်နေ သဘောထားကြောင့်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ စိတ်အားငယ်နေသူ စိတ်ဓါတ်ကျနေသူ ကူကယ်ရာမဲ့ဖြစ်နေသူတွေကို အားပေးကူညီရာမှာ တကယ့်ကိုပဲ ပါရမီပါသူ ပါရမီရှင်တစ်ဦးလဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့များ သူရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးဦးမှာ အဆင်မပြေတဲ့ အခက်အခဲတစ်ခု တွေ့ကြုံနေခဲ့ပါရင် အဲဒီသူကို သူက ပြောပါလိမ့်မယ်.... “လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ဆိုးဝါးတဲ့ အခြေအနေမှာတောင် ကောင်းမွန်တဲ့တစ်ခုကို ရှာကြည့်ပါ။”
ကျမ ဂျယ်ရီနဲ့ တွေ့တဲ့အချိန်မှာ သူ့ရဲ့ ဒီထူးခြားတဲ့ စိတ်ကို သိလာရပြီး သူ ဘာကြောင့် ဒီလို အကောင်းမြင်စိတ်ကို အချိန်တိုင်းမွေးမြူထားနိုင်သလဲလို့ စူးစမ်းလိုစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။ဒါနဲ့ ...........“ဂျယ်ရီ.... ရှင်ဟာ သိပ်ကို အကောင်းမြင်စိတ်ရှိသူဖြစ်တယ်....အချိန်တိုင်းမှာ အကောင်းဖက်ကနေကြည့်တတ်တယ်...ရှင် ဘယ်လိုများ အဲလိုဖြစ်နိုင်တာလဲ”သူက ပြောတယ်....“ မနက်ခင်းတိုင်း ကျွန်တော် အိပ်ရာကနိုးတော့ ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် ပြောတယ်... ဂျယ်ရီ... မင်းမှာ ဒီနေ့ ရွေးစရာနှစ်ခုရှိတယ်...တစ်ခုက မင်း အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့နေဖို့.... တစ်ခုကတော့ အဆိုးမြင်စိတ်နဲ့ နေဖို့...ဒီတော့ ကျွန်တော်အကောင်းမြင်စိတ်ကိုပဲ ရွေးတယ်”... “ ကျွန်တော် မလိုချင်တာ အဆိုးတစ်ခုခုဖြစ်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာ အဲဒီ မနှစ်သက်စရာအခြေအနေရဲ့သားကောင်အဖြစ် နေမလား.... ဒါမှမဟုတ် အဆိုးထဲကနေ သင်ယူစရာတစ်ခုကို ရှာမလား.... ကျွန်တော် ဒုတိယနည်းကိုပဲရွေးတယ်...” “တစ်စုံတစ်ယောက်က ကျွန်တော့်ကို သူ့ရဲ့ စိတ်ညစ်စရာ ပြသနာတစ်ခုခု လာပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာ ကျွန်တော် ဒါကို စိတ်ညစ်စရာအဖြစ်လက်သင့်ခံလိုက်မလား... ဒါမှမဟုတ် သူ့ ပြသနာရဲ့ တစ်ဖက်မှာ တခြားအကောင်းဖက်ကကြည့်နိုင်တာလေးတစ်ခုရှိမလား ကျွန်တော်ရှာတယ်...”
“ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ် ရှင်ပြောတာ... ဒါပေမယ့် ဒါဟာ အဲလောက်တော့ မလွယ်ကူပါဘူး” ကျမ ခပ်မြန်မြန်ပဲ စောဒက တက်လိုက်တယ်။“ဟုတ်ပါတယ်... လွယ်တော့ မလွယ်ဘူးပေါ့... ဘ၀ဆိုတာက ရွေးချယ်မှုတွေချည်းပါပဲ.....မင်း ဘ၀မှာ မလိုအပ်တဲ့ အရာတွေအားလုံးကို ဖယ်ရှားပစ်လိုက်ပါ.... စိတ်ဆိုး စိတ်ညစ်တာ...၀မ်းနည်း ကြေကွဲတာ.. စိတ်ပျက်အားငယ်တာ... ဒါတွေပေါ့....ဒါတွေကိုလွှင့်ပစ်ပြီးသွားပြီးပြီဆိုရင်တော့ အခြေအနေတွေ အားလုံးမှာ ရွေးချယ်စရာတစ်ခုတော့ ကျန်ရှိခဲ့တာပါပဲ.......မင်း ရင်ဆိုင်ရတဲ့ အခက်အခဲ အခြေအနေတိုင်းကို မင်း ဘယ်လို တုန့်ပြန်သလဲ.....တခြားလူတွေက မင်းရဲ့ စိတ်ခံစားချက်ကို လာပြောင်းလဲစေနိုင်သလား.....လွှမ်းမိုးစေသလား..... သူတို့က ပေးတဲ့ ခံစားချက်တွေကို အကောင်းဆိုရင် လက်သင့်ခံထားပြီး အဆိုးဆိုရင် လွှင့်ပစ်လိုက်ဖို့ဆိုတာ မင်းအပေါ်ပဲ မူတည်တယ်လေ.... အဲဒါက မင်း ပိုင်ဆိုင်တဲ့ ဘ၀ကို မင်း ဘယ်လို နေထိုင်သလဲ ဆိုတာပဲပေါ့...”
ကျမ သူပြောတာကို တကယ် သဘောကျသွားတယ်။ မကြာမှီပဲ ကျမ စားသောက်ဆိုင်မှာ အလုပ်လုပ်ရာကနေထွက်လိုက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို စတင်ခဲ့တယ်။ ကျမတို့ အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားခဲ့ကြပေမယ့် သူ့ကို မကြာခဏဆိုသလို သတိရမိပါတယ်..... ကျမ ဘ၀မှာ ခါးသီးတဲ့ အရာတွေ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်တွေမှာပေါ့.... မလိုချင်တဲ့ ပြသနာတွေကို ရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါမှာ အကောင်းဖက်ကနေ လက်သင့်ခံတတ်စေဖို့ ရွေးချယ်တတ်စေဖို့ ဂျယ်ရီ သင်ပေးခဲ့တယ်လေ။
နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင် ကျမ သူ့ကို မတွေ့ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တော့ ထူးထူးဆန်းဆန်းသတင်းတစ်ပုဒ် ကျမ ကြားရတယ်။မနက်ခင်းတစ်ခုမှာ ဂျယ်ရီတစ်ယောက် သူ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ စားသောက်ဆိုင် ဓါးမြမှုမှာ ဓါးစာခံအဖြစ် ခံလိုက်ရတာပါပဲ။ ဖြစ်ပုံက.............ဓါးပြတွေဟာ သူ့ကို သေနတ်ကိုယ်စီနဲ့ ချိန်လို့ ဆိုင်ရဲ့ မီးခံသေတ္တာသော့ကို ဖွင့်ခိုင်းချိန်မှာ ကြောက်ရွံတုန်ရီနေတဲ့ ဂျယ်ရီက သော့ကိုဖွင့်တဲ့ လျှို့ ၀ှက်ကုတ်နံပါတ်ကို မှန်အောင် မဖွင့်နိုင်တဲ့အတွက် သေနတ်နဲ့ ပစ်သွားကြတာပါပဲ။ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ ဂျယ်ရီကိုဆိုင်နီးနားချင်း တစ်ဦးက တွေ့သွားပြီး ဆေးရုံရဲ့ အရေးပေါ်ကြပ်မတ်ကုသဆောင်ကို အမြန်ပို့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၈နာရီကြာအောင်ခွဲစိတ်ကုသမှုအပြီးမှာ ရက်သတ္တပတ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် အထူးကြပ်မတ်ဆောင်မှာ ဂျယ်ရီတစ်ယောက်နေခဲ့ရပါတယ်။
ဂျယ်ရီတစ်ယောက် ဆေးရုံကဆင်းပြီး ၆လလောက်နေမှ ကျမတို့ ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။“ဂျယ်ရီ ရှင်ဘယ်လိုနေလဲ ဒီတခါရော အကောင်းမြင်စရာလေး တစ်ကွက်လောက်များ ရှင် ရှာနိုင်ဦးမလားရှင့်”
“ကျွန်တော် ဒီထက်များ ကောင်းနိုင်ဦးမယ်ဆိုရင်ဗျာ.... နောက်ထပ် ကိုယ်ပွားတစ်ယောက်ရ့နိုင်ပါဦးမယ်... ကျွန်တော့အနာရွတ်တွေများ ကြည့်ချင်လား”သူ့အနာရွတ်တွေကို ကျမ မကြည့်ရဲပေမယ့်... ဓါးပြမှုဖြစ်ပေါ်တဲ့ အခြေအနေမှာ သူ့ရဲ့ ဖြစ်ပေါ်တဲ့ စိတ်ခံစားချက်တွေကို ကျမအရမ်းသိချင်လာပါတယ်။
“ဂျယ်ရီ ရှင် ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲ... အဲဒီအချိန်မှာ ဘယ်လို ခံစားရလဲ.... သိပ်ကြောက်နေခဲ့လား..”“ကျွန်တော် သေနတ်နဲ့ ပစ်ခံရပြီး ကြမ်းပေါ် လဲကျသွားခဲ့တယ်... ကျွန်တော် သတိရခဲ့တာက.... ကျွန်တော့်မှာ ရွေးချယ်စရာ ၂ခုရှိတယ်.... နေဖို့ နဲ့ သေဖို့နဲ့.... ကျွန်တော် ဆက်လက်ရှင်သန်နေဖို့ ရွေးလိုက်ပါတယ်ဗျာ”
“အဲဒီ အချိန်က ရှင် မကြောက်ဘူးလား.... သတိမေ့သွားသေးလားရှင့်”
“အင်း... အဲဒီ အချိန်ကဗျာ... အရေးပေါ်လူနာပြုစုတဲ့သူတွေက သိပ်တော်ကြာတာဗျ....သူတို့က ကျွန်တော် ဘာမှ မဖြစ်ဘူး.... ကောင်းသွားမယ်.. တလမ်းလုံးပြောလာကြတယ်... ဒါပေမယ့်ဗျာ ဆေးရုံ အရေးပေါ်ခန်းထဲဝင်တော့ ဆရာဝန်တွေ သူနာပြုတွေရဲ့ မျက်နှာက ထိတ်လန့်မှုတွေ မြင်ရတော့ ကျွန်တော် သိပ်ကြောက်တာပေါ့..... သူတို့ မျက်ဝန်းထဲမှာ ... ဒီလူတော့ သေလူပါပဲ ဆိုတဲ့ အရိပ်တွေ မြင်နေရတယ်... ကျွန်တော့အတွက် အဆိုးဝါးဆုံးအချိန်ရောက်နေပြီဆိုတာ သိလိုက်တယ်”
“ဒါဆို ရှင် ဘယ်လိုလုပ်လဲ”“အဲဒီအချိန်မှာပဲ ခပ်တောင့်တောင့် ခပ်၀၀ သူနာပြုဆရာမက ကျွန်တော့်ကို အော်မေးတယ်ဗျ.....ဂျယ်ရီ ရှင် နဲ့ မတည့်တဲ့ ဆေးတခုခုရှိသလား” တဲ့
“ကျွန်တော်လဲ ..ဟုတ်ကဲ့..ရှိတယ်ပေါ့... အဲဒီမှာ သူတို့က လုပ်လက်စတွေ အကုန်ရပ်ပြီး ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေကြတယ်....”
ကျွန်တော်လဲ ဆက်ပြောလိုက်တယ်....“ကျည်ဆံ...ကျည်ဆံပေါ့” .... “ကျွန်တော်နဲ့ မတည့်ပါဘူးဗျာ”သူတို့တွေ အော်ရယ်ကြတယ်ဗျ။
ကျွန်တော် သူတို့ကို ပြောလိုက်တယ်....“ကျွန်တော် ဆက်နေဦးမယ်ဗျ..... ကျွန်တော့ကို အသက်ဆက်နေဖို့ မျှော်လင့်ချက်နဲ့ ခွဲစိတ်ပေးပါ.... သေလူ မဟုတ်ဘူးဗျ” ခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်။
သေကံမရောက် သက်မပျောက်ခဲ့သော ဂျယ်ရီမှာ သူ့ကို ကျည်ဆံများ ခွဲစိတ်ကုသပေးခဲ့သော ဆရာဝန်များ သူနာပြုများကို ကျေးဇူးတင်မဆုံးဖြစ်နေပါသည်။
သို့သော်... အရည်အချင်းပြည့် ဆရာဝန်များကြောင့်တခုတည်းကြောင့် သူ အသက်ဆက်ရှင်ခဲ့တာမဟုတ်ပါ..... သူ့ရဲ့ အံ့သြစရာကောင်းလောက်သော ထူးခြားတဲ့ စိတ်စွမ်းရည်တန်ခိုးကြောင့်သာဖြစ်လေသည်။
သူ့ဆီမှ..... နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဘ၀မှာ အပြည့်အ၀ ရှင်သန်တတ်စေရန်..... ကောင်းမွန်မြင့်မြတ်သော စိတ်နေသဘောထားဟူသည်.... အဆိုးကို မကြည့် ..... အခြေအနေ အရပ်ရပ်တိုိင်းမှာ အကောင်းဆိုတာကို ရှုမြင်တတ်စေရန်..နှင့် ထိုကဲ့သို့သော စိတ်ထားသည် အရာရာကို ကျော်ဖြတ်နိုင်စေသော အရာဖြစ်သည်... ဆိုသည်ကို သူမ သင်ယူခဲ့ရလေသည်။ .တဲ့..။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ဒီလိုပါပဲ..ကျနော် ဂျယ်ရီ ကိုသိပ်အားကျသွားတာကလား။သူလို
ရော ကျနော်တွေ့ကြုံခဲ့ရင်ဘယ်လိုအကောင်းမြင်နိုင်မလည်း..။သေချာတယ်ကျနော်တုန်လှုပ်ကောင်းတုန်လှုပ်နေလိမ့်မယ်ဆိုတာ။ဘာလို့လည်းဆိုကျနော်ဟာ ဂျယ်ရီလိုစိတ်ခံရှိမှာမဟုတ်သေးဘူး၊ဂျယ်ရီလောက်မပြည့်စုံသေးဘူး...။တိုချုပ်ရရင်တော့ ကျနော် ဂျယ်ရီ ဖြစ်ချင်တယ်။
မအီမသာစရာဖြစ်စရာပါပဲ။ကိုယ်ဒဏ်ရာကိုလက်နဲ့ဖိထားရချိန် တခြားသူကိုထွေးပွေ့အားပေးနေရတဲ့ပုံမျိုး။ နာကျင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမည်သူကိုမှ မနာကျင်စေလိုဘူး။အဒီခံစားမူ့မျိုးကျနော်က
တနေ့ညက ၁၂နာရီထိုးကြီးဖုန်းက၀င်လာလို့ကြည့်တော့အိမ်က။ အမေသံကဖုန်းထဲမသဲကွဲ။ ´ဟလို...သားရေ..ငါ့သား..အမေပြောတာကြားရလား..´ အသံလေးထပ်ခါခါ
ကိုအပူလှမ်းပေးတာနဲ့တူတူပဲ..၊လူတိုင်းနာကျင်ခံစားချိန်ထီးကျန်ချိန်မိဘကိုအရင်သတိရတာမဆန်းပါဘူး..ဆန်းတာက ကိုယ့်လူငယ်ကိစ္စကို၊ကိုယ်တိုင်ဖြေရှင်းရမယ့်ကိစ္စအစဆုံးတော့ပြောပြီးမျက်ရည်ကျဖို့မလိုပါဘူးမိဘရှေ့။ သားသမီးမျက်ရည်ကျမှတော့ ဘယ်မိဘကစိတ်ကောင်းမလည်း..ဒါကိုသဘောမကျတာ..အလိုမကျတာ..။ကျနော်လည်းခံစားရချိန် မိဘနဲ့ပြောတိုင်းအတတ်နိုင်ဆုံးအပျော်စကားတွေပဲရွှေးပြောတယ်..တချတ်တချတ်အမေကထောက်မှသာ နည်းနည်းငိုင်
ဒီသုံးလေးရက်တွင်း ကျနော်စကားလုံးတွေရှာတယ် ..ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုစကားလုံးတွေ
ထိန်းကွပ်နိုင်မလဲ..ဘယ်လောက်ခိုင်မာမလဲ..တွေးရင်းစောင့်ကြည့်နေတာပြီးတော့..ချုပ်တီးမူ့အဆုံး သူလိုလိုပွင့်အန်ကျလာချိန်ကိုကျနော်စောင့်နေတာ။ ။ကျနော်စိတ်ထဲမှာ
တော့ တော်တော်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတာတော့အမှန်ပါပဲ..။အိမ်မှာက သူကအနေရိုးဆုံး၊အအေးဆုံးအတည်ဆုံးစကားအနည်းဆုံးသူ။ပြီးတော့ ဇာတိမှာသူလိုအရွှယ်တော်တော်များဆိုးတဲ့
ကောင်မလေးနဲ့နီးစပ်ရာလူတွေပေါ့..။အင်းး.....သိရတော့လည်း အခတ်သား..။သူနဲ့သူကောင်မလေးကအသတ်တော်တော်ကွာလွန်းတယ်..။သူကောင်မလေးက ကျနော်ထက်ပင် သုံးနှစ်လောက်ကြီးနေသည်ကိုသိရတယ်..။တွဲလာတာလေးနှစ်..အိမ်နဲ့လည်းသိတယ်။အားလုံးလည်းစီ
စဉ်ပြီးမှ တခြားဘက်ကစိတ်မပါတော့သလိုအခြေနေဖြစ်လာသလိုပေါ့။တချို့တွေကတော့ အနေဝေးခြင်းကြောင့်လိုယူဆကြပေမယ့်ကျနော်ကတော့ဘယ်တော့မှမယူဆ။လေးငါးဆယ်နှစ်လောက်ဝေးနေရတဲ့အခြေနေမျိုးကိုတော့လက်ခံချင်ကောင်းလက်ခံပေးလို့ရပေမယ့် တစ်နှစ်နှစ်နှစ်
ချင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆို သူ့ရင်ထဲကနာကျင်မူ့တွေကျနော်အကုန်သိမ်းပိုက်ယူချင်ပါတယ်..။ကျနော်ဟာ ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေကိုမနာကျင်စေချင်တာကျနော်ရဲ့ရိုးရှင်းတဲ့အတ္တပါ။ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူတွေအားလုံး အပြစ်ကင်းတဲ့ပျော်ရွှင်မူ့မျိုးရရှိစေချင်ပါတယ်။
နောက်တနေ့တော့ ကျနော်ကအခန်းထဲစာဖတ်နေချိန်သူက မပြောမဆိုထိုင်ကန်တော့တယ်..ကျနော်လည်းကြောင်ပြီးအထကျနော်ကိုရိူတ်ကြီးတငင်အကြာကြီးဖတ်ငိုတော့တာပါပဲ။ ဘာမှမပြောနိုင်ရှာဘူး။ကျနော်လေသူကိုပြန်ဖက်ထားပြီးသူခေါင်းလေးပွက်သပ်ထားပေးရုံ
သူအားကိုးရာသူ့အကိုကြီးတယောက်ရင်ခွင်မှာ အဆုံးမဲ့ငိုကြွေးနေလေရဲ့။ ကျနော်ကရော....
ဟုတ်ပါတယ်..ကျနော်လည်း ရင်ထဲ ငိုကြွေးနေပါတယ်..။ ကျနော်ရင်ထဲသိပ်ကိုနာကျင်နေပါတယ်။ကျနော် ကဗျာတွေဟာလည်းချတ်ခြင်းသေဆုံးသွားကြသလိုပါပဲ။
ဒါက ကျနော်တွက်သိပ်ပြီးမခတ်ခဲခဲ့ပါဘူး...ကျနော်ဟာ ဘယ်တုန်းကမှယုံကြည်မူ့
လေး မလူးဖို့မယိမ်းဖို့ လှော်ခတ်နေ၇တဲ့ ပဲ့ကိုင်ရှင်တယောက်မို့ပေါ့။ ကျနော်သွေးအသားတွေ
အားအင်ကုန်ခမ်းခြောက်သွားတောင် ကျနော်အသက်မျှင်းမျှင်းမျှရူခွင့်ရချိန်ထိ ၊ရည်ရွှယ်ရာကမ်းမရောက်သ၍ ကျနော် ဒီပဲ့ကိုထိန်းရမယ့်လူလို့ခံယူထားရင်းအခု ကျူပ်ရင်ထဲရှိူတ်ငင်နေတဲ့မျက်ရည်တွေတန့်သွားဖို့စကားလုံးရှာနေရသည်။
အတော်ကြာတဲ့ထိငိုပြီးမှ ကျနော်ပုခုံးပေါ်စီးကျနေတဲ့သူမျက်ရည်တွေကိုသူလက်နဲ့ပြန်သုတ်ပေးရင် စကားဆိုရှာသည်။
`` ကျနော့်ကို အချိန်နည်းနည်းပေးပါ ကိုကြီး..ကိုကြီးကဒီပုံစံမကြိုတ်တာသိပေမယ်ကျနော်မခံစားနိုင်တော့လို့ပါ..´´
ကနော်က စကားဆတ်ဆိုရင် ...
``ဒီချိန်မှာမင်းတယောက်တည်းတသီးတသန့်မနေသင့်ဘူး..မင်းစိတ်ဒဏ်ရာတွေထပ်ရဖို့ လွမ်းဆွေးသီချင်းတွေနားမထောင်နဲ့လေ..ပြီးတော့ မင်းကို နာကျင်စေမယ့်ဘယ်လိုအမှတ်တရမဆိုသိမ်းမထားနဲ့လေ..လွှင့်ပစ်ရဲရမယ်..။..´´
``..ဒီမှာကြည့်စမ်း..ညီ..မင်းကမှမင်းသိပ်ချစ်တဲ့သူကိုချစ်ခွင့်ရခဲ့သေးတယ်..ငါကငါသိပ်ချစ်မြတ်နိူးသူကိုချစ်ခွင့်တောင်မရခဲ့သလို အမြဲလည်း အကြုိူဆိုမခံခဲ့ရပါဘူးကွာ..မင်းမြင်မှာပေါ့..ဒီအခန်း
ဟိုတခါမင်တခါဝတ်လိုက်တဲ့အကျီ င်္လေးဟာလည်းငါ့အတွက်အမှတ်တရမို့ အပြင်ရောတာတောင်တွေ့တာနဲ့ ငါ့ကိုယ်ပေါ်ကအကျီ င်္နဲ့မင်းကိုလူကြားထဲအတင်းချွတ်လှဲခိုင်းခဲ့တာမှတ်မိဦး
မှာပေါ့..၊အဲဒီချိန်တုန်းကတော့မင်းနားမလည်စွာငါ့ကိုတမျိုးထင်ချင်ထင်မယ်..ဒါမယ့်ဒါငါ့အတွက်အမှတ်တရတွေ၊ငါသိပ်မြတ်နိူးတဲ့အရာတွေပေါ့..ဒါပေမယ့်မင်းသိလားညီ...ဒီအမှတ်တရတွေအားလုံးက ငါ့ကိုဘယ်တော့မှနာကျင်မူ့ကိုမပေးနိုင်ဘူး။ငါချစ်တာကငြင်းပယ်ခံရခြင်းတွေကို အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ချစ်ခင်မြတ်နိူးတာ..။သူက ငါ့ကိုလက်ခံမှ၊သူကငါ့ကိုပြန်ချစ်မှ ဆိုပြီ့းရလာတဲ့အတ္တနဲ့ငါ့ကိုငါချစ်မိတာမဟုတ်ဘူး..ဒီမှာကြည့်စမ်း..ဟောဒီဖိနပ်လေး၊ဟောဒီမှာသူသောက်သွားတဲ့ရေဗူးလေး၊ဟောဒီမှာ သူလက်ရေးအပိုင်းအစလေး ဟောဒီမှာသူကျွတ်ကျနေခဲ့ဆံနွယ်လေး ၊ဟောဒီမှာ အင်းကြင်းပန်းစင်္ကြာလေး ၊ဟိုမှာမွေးပွရုပ်လေး အို..အများကြီးကွာ..အများကြီးပါ
သိမ်းထားဦးမှာ.။ငါ သူ့ကိုချစ်တယ်ဆိုတာသူသိတယ်..ဆိုတဲ့ချစ်ခြင်းမျိုးထက်ငါပိုချစ်တာကွ။ .´´ ဘုရားရေ..ကျနော်ကဘာကြောင့်ပေါတ်ကွဲနေသလိုမျိုးညီကိုပြောနေမိတာပါလိမ့်ဗျာ..။
ဒီနေ့ကတိုက်တိုက်ဆိုင်ကျနော်လှေဦးက ဖန်မီးအိမ်လေးဟာဖျတ်ခနဲ့မူတ်ငြိမ်းခံလိုက်ရသလိုသတင်းတပုဒ်ဟာလေးပြင်လေးတသုတ်လို့ကျနော့်လှေဦးက ဖန်မီးအိမ်လေးမူတ်ငြိမ်းခဲ့ရပြီလေ။..
``ညီ..မင်းက ငါ့ထက်အများကြီးကံကောင်းခဲ့ပါတယ်ကွာ..မင်းချစ်တဲ့သူဆီက ကြင်နာတဲ့ချစ်ခြင်းနဲ့တုန့်ပြန်မူ့ကိုမင်းကအချိန်အတိုင်းအတာထိရခဲ့ပါတယ်..။တကယ်တော့ကွာ တို့မသိတဲ့
အကြောင်းရာတဖက်မှာသူတို့အတွေးနဲ့ကိုက်ညီတာတို့မဟုတ်တာကိုနားလည်ပေးနိုင်ရမယ်လေကွာ..။သူတို့ရွှေးချယ်မူ့ကိုလည်းတို့ တွေနားလည်ရမယ်၊။တို့တွေကခုချိန်ထိသုညထဲကဖောက်ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေရတုန်းလေကွာ..။တို့ချစ်တဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုအခြေနေမျိုးမှာမဆို မြင့်နေရမယ်၊တင့်နေရမယ်၊ပျော်ရွှင်နေရမယ်..ဘယ်သူကြောင့်ဖြစ်ဖြစ်တို့ကျေနပ်ရမယ်..။ညီ..မင်းစိတ်လှောင်အိမ်တံခါးကိုဖွင့်ပေးလိုက်စမ်းပါကွာ..၊ပြီးတော့..ဟိုးးးးးးအမြင့်ဆုံးထိပျံနေတာကို မင်း
ကိုယ်တွေ့ကြုံရတဲ့အခြေအနေတခုပေါ်ကြည့်ပြီးအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကိုယ်စိတ်ထားလေးကိုယ် နေတတ်ထားတတ်လာအောင်နေမယ်ဆိုတခြားတဘက်မှာ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒ လုပ်ချင်တာဆန္ဒတခုတွက်တော့ အကောင်းဆုံးတွန်းအားဖြစ်စေတာပဲ။
ငါကတော့ တခါတလေ ကိုယ်ကရွှေးချယ်လို့မရတဲ့အခါကံတရားကသူ့ ဟာသူရွှေးချယ်ပေးတာ ၊ ကြုံခွင့်ရတာအကောင်းဆုံးပဲမြင်တယ်။။ငါမပြတ်သားနိုင်တာကို သူကပြတ်သားနိုင်အောင်လုပ်ပေးတာကိုး။လွယ်တော့မလွယ်ဘူး အကောင်းမြင်စိတ်လေးတော့ထားနိုင်ဖို့ ခံနိုင်ရည်တော့ရှိရတာပေ့ါ။
နာကျင်ခြင်း..၊ကြေကွဲခြင်းစိတ်ခံစားမူ့ဆိုတာ လူတိုင်းတွေ့ကြုံခံစားရမှာပဲ..လူဆိုတာလည်းကိုယ်ချစ်ခင်မြတ်နိူးကြတဲ့ သတ်မဲ့ ပစ္စည်းလေးတွေ ၊ ငှက်ကလေး၊ကြောင်ကလေး၊ခွေးကလေးတွေကအစ ဆုံးရူံးရရင်နာကျင်ကြေကွဲကြသေးတာပဲကိုး ..လူတယောက်ကလူတယောက်ကိုသူချစ်ခင်မြတ်နိူးရသူနဲ့ လမ်းခွဲရရင် ၊ဆုံးရူံးရရင် နာကျင်ကြေကွဲရတာတော့မဆန်းပါ။ကိုယ်ကပတ်သက်ချင်ပေမယ့်အခြားတဖက်ကခါးခါးတူးတူးငြင်းပယ်ခဲ့ရင် ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ ကိုယ် ..သြော်..ငါရှိရင်သူစ်ိတ်ညစ်နွမ်းရမယ်၊ငါ့အပြုအမူတိုင်းကလည်းသူတွက် မသာယာနိုင်ဘူး၊ ငါဘယ်လိုကြိုးစားကြိုးစားသူ့အတွက်အဆင်မပြေဘူးဆို..ကိုယ်က သူ့ကိုချစ်တဲ့သူလား..၊သူ့ရဲ့တုန့်ပြန်မူအပေါ်အခြေခံပြီး ကိုယ်ကိုကိုယ် ချစ်သောအတ္တနဲ့ချစ်တဲ့သူလား..အရင်ဦးဆုံးတော့ခွဲခြားသိရမှာပေါ့..။သူ့အပေါ်တကယ်ချစ်ရင် သူ့စ်ိတ်ချမ်းမြေ့စေရာ ၊သူစိတ်သက်သာရာအတိုင်းရှိပါစေ..။
ဒါဆို ကိုယ့်စိတ်နာကျင်မူ့လည်းဖြေသာနိုင်မယ် ကိုယ်ကိုကိုယ်လည်း ကျေနပ်စွာရင့်ကျတ်စွာပြုံးနိုင်မယ်။ ငှက်ကလေးဆိုတာ လှောင်အိမ်လေးထဲထည့်ပြီး ကျလိကျလိအသံလေးနားထောင်ပြီးချစ်ဖို့မှမဟုတ်တာ..ငှက်ကလေးကျလိကျလိအသံက သူစိတ်ချမ်းသာရာလွတ်လပ်ရာကောင်းကင်ဆီ ပျံသန်းဖို့တောင်းဆိုတဲ့သူ့ဘာသာဗေဒသကားသံလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပေါ့..။ကိုယ်ချစ်ရတဲ့သူက ပျံသန်းချင်နေပြီဆို ကိုယ်က လှောင်အိမ်လေးတခုအဖြစ်မနေပါနဲ့..ကိုယ်ရင်ကိုဖွင့်ပြီး ဟိုးး...မိုးအမြင့်ဆုံးထိသူပျံပါစေ..ငှက်ဆိုတာလည်းပျံနေမှပိုလှတာကိုး။ပန်းပွင့်လေးတွေဆိုတာလည်း သူဟာသူဖူးအာပွင့်နေတာကိုက ပိုလှပါတယ်..။တို့တွေဟာ ဂျယ်လီလိုလူသားဖြစ်ရမယ်..။ဘ၀ကိုအတတ်န်ိင်ဆုံးအကောင်းမြင်စိတ်နဲ့ဖြတ်သန်းရမယ်။
(သစ်ရွက်မှာ).....ကြွေတာ ရှိရင် ဝေတဲ့ အဘိဓမ္မာ ကပ်ညိပါပြီးသား..
ဗမာပြည်သားဆရာမောင်ချောနွယ်ကတော့ပန်းဆိုတာ..တစ်ပွင့်ကြွေပြီးရင် တစ်ပွင့်ဝေတာပဲတဲ့ကြွေနေတာကိုက ဝေနေခြင်းပဲလေ..တဲ့..ကိုယ့်အဘိဓမ္မာ ဟာ ကိုယ်မှာ ကပ်ငြိပါပြီးသားပါ.....
ပြီးတာနဲ့သူ့ထိုင်နေတာကိုကျနော်ပွေ့ယူပြီး ကျနော်တို့ ညီအစ်ကိုနှစ်ယောက် တင်းတင်းကြပ်ဖက်ထားကြတော့တယ်..
ငါ့ရဲ့ ဗီဇ တစ်ရပ်ပမာ
``လိုအင်များ ဒိုင်ယာရီ-စာရင်း`` ပေါ့ဗျာ
နှ င်းမြူ သို့ သွား ရာလ မ်း ။
အခုလို နွမ်းတဲ့ ညဉ့်ဦးယမ် တစ်ရပ်
မြင့်မားစွာ အရိပ်မိုးထားရာ နေ့လည်ခင်းမှာငါထိုင်ကာ
ပြုံးတဲ့ မေရဲ့ ပုံတူကို ရေးဆွဲနေခဲ့ဖူး။
သူမဆိုင်ရာ စကက်ခ်ျ အကြောင်း
သူမဟာ ငါ့ တရား တစ်ပုဒ်ပမာ ဖြစ်လာခဲ့တော့၏။ ။
လိုင်းရစ်အိုအို သစ်ရွှက်ပင် သစ်ရွက်တေး
တဖက်ကမ်းလမ်းရဲ့ ညနေ တိုင်ရင်
ကုက္ကိုန်းညို တန်း ပင်ဖျားအိပ်စက် အိပ်တန်းငှက်တို့သံသာကြားရပြန်မိ
အိပ်တန်းတက် နောက်ကျ ငှက်
......ကြွေတာ ရှိရင် ဝေတဲ့ အဘိဓမ္မာ ကပ်ညိပါပြီးသား
......ဘဝရဲ့ လိုင်းရစ်တေး။ မြို့သူမယ်ရဲ့ အပျိုစင် တစ်ဦးနဲ့
အခုထိ ငါ ရနိုင်ခဲ့ခြင်းတော့ မရှိ
ဒီအတွက်လဲ ငါ့မှာ နောက်ထပ် ပြောစရာ
ဘာမှ မရှိတဲ့ ပုံစံမျိုး။
နှုတ်ခမ်းနွေးလေး အိမ်လာလည်ရင် ကောင်းမယ်။
အမှုန် ဒါမှမဟုတ် လျှပ်စစ်လှိုင်းတွေပဲလား
မြို့သူမယ် ဂရပ်ဖ် ငါ ပြုစုမယ်။
သစ်ရွက် (+) (-) တစ်စုံလိုပဲ
ငါ သွားရောက်ခဲ့ဖူးရာ ....၎င်းအဝေး။
ဒါမှမဟုတ် ...သူမရဲ့ ည
``အဲဒီရက်က လဆမ်း ဆည်းဆာမှာ
သိပ်ကို ရွှန်းပနေခဲ့တယ် ဆိုတာကို
ငါ့ ပြန်တမ်းဒိုင်ယာရီ မှာ ဖော်ပြမယ်..။
သွားကြပြီ ဟု ယူဆရသည်။ ငါကတော့
အသက်ဆက်၍ နေရပေသည်။ မြင်တွေ့
ရသည့် ငှက်ကလေး ဟူသည်မှာ သူမ ဟု
ပိုမို သိသာလာခဲ့တော့သည်။ ။``
......(ငါ့ ဖြောင့်ချက် တစ်ခု.....မှ။)
စူးစိုက်ပြီး နက်ရှိုင်းကာ လှပ
သူမရဲ့ မျက်ဝန်း တစ်စုံ
.....ထုံးနှောင်ရန် ငါ တတ်နိုင်ချင်ခဲ့ပါတယ်။ ။
ကမ္ဘာ တစ်ခုနဲ့ ငါ နီးစပ်လာရပါဦးမယ်။
ငါတို့လဲ ဘဝတွေ မဲ့နေခဲ့ကြသလို
ကြယ်စင် မရှိ....အရုဏ်လဲ့လဲ မရှိ
ပြန်ပြီး ညာနေသလို မဖြစ်ချင်ပါဖူး
ချွေလှဲခံနေကြရ ငါတို့ရဲ့ ဘဝတွေ များများစားစားပဲ
အချစ်က အချစ်လို ပွင့်ပါစေသား
ည တစ်ည ရောက်ရှိနေခဲ့
သွယ်လျတဲ့ ကြယ်ဖျတ်လက်လေးတွေနဲ့ အတူ
အခုပဲ ငါ မျက်နှာမူလိုက်တယ်
``လွတ်လပ်စွာ ကြည့်ခွင့်``...လို့ ထပ်ပြီး ဆိုမယ်။
ငါ သတိရတိုင်း ကောင်းကင်ကိုမော့ကြည့်နေတယ်..
သူမ ဖျက်လက်တောက်ပ ကြယ်လေးတလုံးလိုတွေ့ရတယ်..
အကော့ညွတ်ဆုံး သဇင်ဖြူတွေနဲ့လဲ သူမ တူတယ်
ကောင်းကင်ယံက ငါမှတ်သားထားတဲ့ သူမ ကြယ်ပွင့်ပြိုးပြက်သံလေးတွေကိုရောပဲ...
သူမရဲ့ လည်တိုင်က မြည်သံချွင်တဲ့ ဆံစများ၏ပွတ်တိုက်သံ
ပြီးတော့ သူမရဲ့ အကြည့်မျက်ဝန်းတစ်စုံကို
ဂုဏ်ပြုလိုက်တဲ့ သဘောပဲ ဆိုပါတော့လေ..
ငါ ရင်ခုန်နေတာကို တင်စားကြည့်မိတာပဲ ဖြစ်မယ်။
ချစ်သူမယ်ရဲ့ နှုတ်ခမ်း ပန်းဆီရောင် နီမြန်းမှုကို
``တြိဂံဆန်တဲ့ ....တေး``လို့ ငါက အမည်ကြမ်းတစ်ခု
``ကြိဂံတေးလေးကို ငါ ထိနမ်းနေချင်လို့ပဲ...နေမှာ``လို့
အရပ်ရဲ့ ထင်မြင်ချက်တွေကို ဂရုစိုက်လေ့ မရှိခဲ့ပါဖူး။
``မင်းကို ငါ ချစ်တယ်....``လို့
ထံတျာတေ အဖြစ်ဆုံး ဒီဝါကျလေးကိုပဲ
မပြုမပြင် မူရင်းအတိုင်းပဲ သုံးနှုန်းလိုက်မယ်
ငါ့အနီးအနားလေးမှာ တစ်နေ့လည်လုံး နီးပါးမျှ
သူမရဲ့ ချည်သားဝါအကျီ င်္လေးလှပကြောင်းအပြင်
နေလည်ခင်းတစ်စငါ့အပေါ် စိတ်မရှည်- ငြိုငြင်ကြလု နီးပါးမျှ။
ကဗျာလိုင်းရစ်လေးကို ငါ ဖတ်ကြည့်နေခဲ့မိ
......``ဘဝဟာ အနှစ်သာရ မရှိ
ဘာညာ``......ဆိုပြီးလဲ ငါ မပြောချင်တော့ပြန်ပါဖူး။
အများပြည်သူ အလုပ်ပိတ်ရက် တစ်ရက်လိုပဲငါ့ရဲ ရက်အားတစ်ခုအဖြစ်
ချစ်ရသူမယ်ရဲ့ စကားပြောသံ တီးတိုးသံအစ်လေး............
``အရင်းနှီးဆုံး``......လို့ အဓိပ္ပာယ် ထွက်ပုံရတယ်။
အထူးတလည်ဖြင့် သူမ လက်သည်းဖြူဖြူလေးတွေပကတိတိုင်း
ဖြူချွန်ထားတတ်သည်......ဟု ဆိုလျှင် အဲဒီလိုပြောပြပြီးတော့မှ
သူမကို ဂရုစိုက်နေသူ လူတစ်ယောက်...လို့
ငါကိုယ်တိုင်က အတိအကျ ဝန်ခံသလို ဖြစ်သွားခဲ့။
တစ်ပိုင်းတစ်စ အဲဒီ ``လိုင်းရစ်မလေး``က
ငါ့ကို မျက်စောင်းလေးနဲ့ ကြည့်ခဲ့ပြန်ပါရော
ဒီလက်သည်းဖြူလေးရဲ့ အနီးက လူတစ်ယောက်မှာ
စွန့်လွှတ်ဆုံးရှုံးစရာ ဘာမှ မရှိတာပဲ။
သူမ ခပ်အေးအေးလေးပဲ ပြောနေခဲ့ခြင်းလား
ဒါကို ငါ သိခဲ့တာတော့ မဟုတ်ပါဖူး။
ငါ ဖတ်ဖူးတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲကလို
``ခုလို ကြိုတင်သတိပေးမှုလေးနဲ့ ဆို
တော်သေးတယ်...လို့ ဆိုရမလားလဲ ငါ မသိခဲ့ပါဖူး။
ဒီနေရာမှာ ငါက ထုတ်ဖော်မပြောပြလိုခဲ့ပါဖူး။
(ဒီအချိန် လမ်းဘေးဆိုင်လေးတွေ ပိတ်ပြီ
..........လို့ ငြိမ်တိတ်ခြင်းက ပြောတယ်)
ငါ အိပ်ရရင် ကောင်းမလား
ရွက်ကြွေညမှာ အပြင်ထွက်ပြီး လမ်းသလားမယ်
နာရီ စက်သံ......၄-၀၀ အေ၊အမ် ရှိပြီ..
(အနည်းဆုံး) ...သူမအပေါ်ဖြစ်ဖြစ် မှားယွင်း
အိပ်ပျော်သွားဖို့ရာ လုံလောက်နေခဲ့မှာ မဟုတ်ပါဖူး။
သူမနဲ့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ ခပ်ပါးပါး အထိ တစ်ရပ်
ပုံတူ ပန်းချီကားကို ရေးဆွဲကာ
``ဒါဟာ အနုပညာပါပဲ......``လို့ ဆိုခဲ့ရင်
သူမနဲ့အတူရှိနေခြင်းကလည်းသိမ်မွှေ့ကြည်နူးတဲ့ အနုပညာလို ငါဆိုလိုခဲ့ချင်တယ်။
အဲဒီသတင်းမှာပဲ တီးတိုး ဖော်ပြကြသေးတယ်
ထိုမျှရဲရင့်သူလေးရဲ့ အချစ်သီချင်း ငါဆိုနေခဲ့တယ်ညယမ်များ။
ငါတို့ နှေးဖြေးစွာ ဝေးသွားကြတဲ့အခါ
ခင်းဖြန့်တဲ့ မိုးလေး စဲသွားတဲ့အခါ
ခူးလိုက်ရင် နွမ်းသွားမှာလဲ စိုးတဲ့အခါ
ခေတ်ပေါ်ဂန္ထဝင် ဒီနေ့လည်လေး ပြီးသွားတဲ့အခါ
ချယ်ရီရောင် အင်္ကျီ ချိတ်ထမီမည်းလေးနဲ့
ကြယ်တွေစုံတဲ့ည ပန်းချီကားလေးလိုမျိုး ငါ တပ်မက်မိတဲ့အခါ....
ပိတောက်ဝါမလေးအား တနေ့တယမ်မှ မမေ့..
ကံကြမ္မာသည် ( ဖြတ်သန်းခဲ့ရသော ) တရံရောအခါ သည် မျက်နှာဖုံးများ ဟန်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည် ။ ငရဲမီးပူးကပ်နေသော နေရောင်ဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော်လက်ဖဝါးပေါ်က အသက်လမ်းကြောင်းသည် လင်းတလှည့် မှိန်တလှည့် ဖြစ်နေသော လျှိုဝှက်ချက်များကို သိုမှီးထားတတ်သည့် သူမဖြစ်သည် ။ ကျွန်တော် ရဲ့နေ့ တစ်နေ့ သည် တစ်လှမ်းချင်း ထွက်ခွါသွားသော ခြေရာများပေါ် တရွတ်တိုက်ပါသွားတယ် ။ ကျွန်တော် အရိပ်ဟာ မသိမသာ သူမ ဆီက မှုန်ဝါး လွင့်စင်နေပါတယ် ။
အမှောင်ရက်လုပ်ထားသည့်အချိန်မှာ အေးမြစွတ်စိုသော နှင်းငွေ့ နှင်းမှုန်များ နှင့် ဆောင်းဦးပေါက်ကာလလေးကို ဖြတ်သန်းသွားလာမိတယ် ။ မျှော်လင့်ခြင်းများသိမ်းဆည်းထားတဲ့ ပြတိုက်တစ်ခုကို တည်ဆောက်လိုက်ရဲ့ ။ တညလုံး နှင်းဆီ မီးလျှံတွေ ခုန်ကနေသည် ။ ကျွန်တော် လင်္ကာတစ်ပုဒ်ကို ခရမ်ရောင်သစ္စာပန်းများ နှင့် သီကုံး ရွတ်ဆိုရင်း ညရိပ်ညရောင်သည် တလွှာချင်း ခွါချနေခြင်းတောင် မသိရတော့ ။ အရုဏ်ဦး အရုဏ်ဖျား ထွန်းညှိနေသည့် လမ်းလေးဆီ ငေးမောရင်း အိပ်မက် တခြမ်း က ပဲ့ကြွေသွားတယ် ။ညယံ၏တခြမ်းလုံးသူမပုံရိပ်များမကြာခဏတွေ့ရသည်။
ကျွန်တော် ချစီရေတွက်ထားသော ကံကော်ရွက်များကို မီးရထားတစ်စင်းက ကြိတ်ချေပြီးမှ ထွက်ခွါသွားပါတယ် ။
`` တနာဂတ်လုံး ´´ ကျွမ်းလောင်ပြာကျ အမှောင်များပြိုစင်းလာတယ် ။ သန်ခေါင်ယံတိတ်ဆိတ်ခြင်းများတွင် ဆွတ်ပျံ့လှိုက်မောတမ်းတသံများ တငွေ့ငွေ့ ပူလောင်နေ၏ ။ အနီးအနားရှိသောသူများ လည်းသတိမထားမိကြပါဘူး ။ ကျွန်တော့်အသံကို သူတို့လည်း မကြားစေလိုခဲ့ ။ ကျွန်တော် သစ္စာတရားကို ရင်ထဲမှာ ဖြူဖြူစင်စင်လွှင့်ထူထားပါတယ် ။မီးလုံးလေး ထောက်ခနဲ့ပိတ်ချလိုက်တော့
အခန်းထဲမှာ ကြယ်လေးတွေ မူန်မွှားစွာလဲ့ကျနေတယ်..နဖူးပေါ်လက်တင်ပြီး ကြယ်ရောင်မွဲလေးတွေဒီလိုပဲ အတွေးမဲ့ ငေးကြည့်ရညပေါင်းများခဲ့ပြီ..။ခဏအကြာမီးလုံးလေးပြန်ထအဖွင့်..မီးလုံး
ကလေးဟာ... ငြိမ်ငြိမ်လေး ရပ်နေပြီး....အိမ်ရှေ့ပြတင်းမှာတော့ ကျွန်တော်ဟာ............ခပ်မှိန်မှိန်လေးပဲ လင်းနေခဲ့ပါတယ်။ပကတိအထီးကျန်မူ့မှာ ကျွန်တော့် လေသံကို ဟိုးးးးးးးးအနိမ့်ဆုံးထိချခဲ့ပါတယ်။
ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့လည်း ကိုယ့်နာမည်ရှေ့မှာ ဘာမှ မရှိ...ကိုယ့်နာမည်နောက်မှာလည်း ဘာမှ မရှိ...နောက်..ကျွန်တော့် လေသံကို ဟိုးးးးးးးးအနိမ့်ဆုံးထိချခဲ့ပါတယ်။အမှောင်ထဲမှာ ဖြူဖြူစင်စင်လွှင့်
ထူးထားတဲ့ အလံကလေးဟာ တဖျက်ဖျက် လွှင့်လူးလို့..။
ရွှေဝါရောင် အလင်းတန်းများကြား က ဒီဇင်ဘာ ရဲ့အေးစက်စက် လက်ချောင်းများသည် ရှည်လျားလှ၏ ။ တချက်တချက် ကိုက်ခဲလာသောလေပြည်သည် ရန်သူတစ်ယောက် ရဲ့ ဓားချက်လို ပီသလှ၏ ။ ည သည် အမှောင်ထဲမှာ သေနေ၏ ။ ကျွန်တော် ရင်ထဲတွင် မေးခွန်းများစွာ အလယ်မှာ မရေရာခြင်းများတင်းကျပ်လှ၏ ။ `` ည ´´ ကဗျာတစ်ပုဒ် သည် မြားတန်းလန်း ဖြင့်ရောက်လာ၏ ။
|| ည ||
စံပယ်ရောင်မုသား မှာ ပျောက်ရှ
ငါ တို့ အစားထိုးပျောက်ဆုံးနေပြီ
မလှမ်းမကမ်း လွင်တီးခေါင်မှာ လွင့်ပါး
နှင်းတသုတ်ရိုက်နှက်ခြင်း ကို ခံစား
ငါ တို့ အစားထိုးပျောက်ဆုံးနေပြီ ။
နံရံပေါ်က နာရီသံ တချက်ချက်ကြားမှာ မဟူရာကျစ်ဆံမြီးလေး တရမ်းရမ်းဖြင့် ညက ကျွန်တော် ကို ကျီစား ရယ်မောနေပါတယ် ။ ကျွန်တော် ရဲ့ နှောင်တွယ်မြတ်နိုးခြင်းဆိုတာ
ခရေပန်းကလေး ကိုယ်သင်းရနံ့ တယုတယ ဖမ်းဆုပ်နေသလိုမျိုး ၊အလင်းမရတဲ့သစ်ရွက် က နေရောင်ကို တမ်းတမ်းတတ ရွတ်ဆိုနေသမျိုး
ကျွန်တော် က သူမ ကို သတိရခြင်းဆိုတာပုဇင်းရင်ကွဲကလေးဟာ ရင်အုံပွင့်ဖြာထွက်မတတ် တေးသွားကို တသက်တာဝဋ်ကြွေးတစ်ခုလိုအော်ဟစ်မြည်တမ်းနေသလိုမျိုး
နေပူခံပြီး အရိပ်ကို စောင့်မျှော်နေသလိုမျိုး
သူမ နဲ့ပက်သက် တဲ့ နူးညံ့သိမ်မွေ့ခြင်းဆိုတာ စေတီတော် ရင်ပြင်က ဆည်းလည်းသံအေးအေးလေး ကို ခြေစုံရပ် ရို့ကျိုး သလိုမျိုး
သူမ နဲ့ ပက်သက်ပြီး တိတ်ဆိတ်ဆွံ့အခြင်းဆိုတာ ဝက်အူရစ်ကလေးထဲထည့်အကြပ်ခံ ရတဲ့ ဝါရှာကွင်းလေး လိုမျိုး
ကျွန်တော် ရူးသွပ်ခြင်းဆိုတာ ဝါဆိုလပြည့်ရောက်ပြီဆိုတာ နဲ့ ပျော်ရွှင်စွာညာသံပေး အော်ဟစ်ပြီး သီတင်းကျွတ်လပြည့် ဆိုတာနဲ့ သေမယ့်ရက်ကို လက်ချိုး ရေတွက်နေရတဲ့ ကင်ဆာ ရောဂါသည် လိုမျိုး ကျွန်တော့်ခေါင်းက ဆံဖြူလေးတချောင်းမြင်ရတိုင်းဆွဲုနူတ်ကြည့်ချင်ပေမယ့် သူမက" မနူတ်နဲ့ ပွားတယ်"..ဆိုသံလေးပြန်ကြားရတိုင်းလည်း ထိုဆံဖြူလေးကရှိမြဲရှိနေသလိုမျိုး
ကျောက်သားနံရံတွေ အရည်ပျော် သွားအောင် အော်ခေါ် နေမိတယ် ။ သူမ..ဒီထက်ပိုမိုတောက်ပလွှင်ဖို့ ကိုယ့်မှာအထောက်ပံ့နည်းတယ်..သူမဒီထက်ပိုမိုတောက်ပရမယ်၊သစ်လွင်ရမယ်..
က မ္ဘာ မြေ မှာ သူမ အသက်ရှုသံတွေ စိမ်းလန်းစိုပြေဖို့သစ်ပင်လေးများစိုက်ပျိုးခဲ့ပါတယ် ။ သာယာသောတေးသွား များနားဆင်ဖို့ ကျေးငှက် ကလေးများ ကို
အစာရေစာ ကောင်းမှုပြု ပြီး မေတ္တာပို့ဆုတောင်းခဲ့ပါတယ် ။ သူမ နောက်ထပ် မွေးဖွားခွင့်ရတဲ့ အခါ ကမ္ဘာမြေ
သန့်စင်ဖို့ အကုသိုလ် တရားနဲ့ အတူ လူသားများ ရဲ့ အမုန်းအာဃာတ တရားများ ကို ကျွန်တော် စင်္ကြာဝဠာ အပြင်ဘက် သယ်ဆောင်သွားချင်ပါတယ် ။ သူမ နေထိုင်ရာမြို့ နဲ့ ကျွန်တော် နေထိုင် ရာ ကျေးလက် တကယ်တော့နီးနီးလေးထင်ရပေမယ့် စိတ်ထဲမှာ အလင်းနှစ်ယူဇနာသန်းပေါင်းများစွာ ဝေးကွာ နေပါတယ် ။ နံနက်ခင်းသတိရခြင်း
အလင်းတန်း နဲ့ နှုတ်ဆက်ပေမယ့် ကျွန်တော့် ရဲ့ ဘာသာဗေဒ ဟာ သူမ အတွက် ခြင်တစ်ကောင် အော်မြည်သံလို
နားစည်မှာ အနှောက်အယှက် ဖြစ်ပါလိမ့်မယ် ။ မနီးခင် က ဝေးရတဲ့ အဖြစ် ဟာ မငိုခင် က ရှိုက်ရသလို
မဆူးခင် က ထွင် ရသလို ဆတ်ဆတ် ခါခါ နာကျင်ရပါတယ် ။တကယ်တော့ သုည ´´ ကို တမ်းတနေသော သူရူးတစ်ယောက် အိပ်မက်သည် ကျွန်တော် ဖြစ်သည် ။
သုည ကိုတမ်းတနေသော သူရူးတစ်ယောက် အိပ်မက်သည် ကျွန်တော်ဖြစ်သည် ။
သူမ က ကြယ်ကလေးများ ငေးရင်းရယ်မောတတ်ပါတယ် ..ဒါက မောင်ရင်ဆိုင်းထမ်း၊ဒါက ဖျောက်ဆိပ်ကြယ် ၊ ဒါက ရှင်မွှေးလွန်းနဲ့မင်းနဒ္ဒာကြယ်..ဒါကရွှေလိပ်ကြယ်..သူမမသိပေမယ့်
သူမ က ကြယ်ကလေးများ ငေးရင်းရယ်မောတတ်ပါတယ်။ သူမ က လေအဝှေ့မှာ ရယ်မောသွာတဲ့ သစ်ရွက်များ လို ရယ်မောတတ်ပါတယ် ။
သူမ က သစ်ရွက်ကလေးများ ကြွေတိုင်းမျက်ရည်ဝဲတတ်ပါတယ် ။အဲ့လောက်ထိသနားကြင်နာမူ့အပြည့်ရှိသည်။
သူမ က မျက်တောင်ကော့ကော့ သနားစရာကောင်းလောက်အောင် ဖြူဖွေးနေတဲ့ ခရေပန်းအသေလေးတွေကို ကြိုးနဲ့သီတိုင်း မျက်ရည်ဝဲတတ်ပါတယ် ။အဲဒီလောက်ထိ နူးညံ့သိမ်မွှေ့သူ။
`` ချစ်သူသာအနားမှာ ရှိရင် စီးကရက်ပြာခြွေတာက အစ အဓိပ္ပါယ်ရှိတယ် ´´ *
ညီမွန် ကဗျာတစ်ပုဒ်ထဲက စာသားလေး ကို တိုက်ဆိုင်တဲ့ အခါတိုင်း ရွတ်ဆိုမိတာအခါခါ ။
`` ကျွန်တော် သူ့ဆီက တစ်စုံတစ်ခုကို
ကျွန်တော် သူ့ဆီက တစ်ခုကို တောင်းတနေမယ့်အစား
ကျွန်တော် သူ့ဆီ ကို တစ်စုံတစ်ခု ထက်မက ပေးပို့လိုပါတယ်
သူ သည် က မ္ဘ္ဘာမြေကြီးဖြစ်၍
သူမ ကို ရှေ့မှာထားပြီး
စွဲနေမိတဲ့ ကဗျာလေး ဖတ်တုန်းက အချိန်တွေ ပြန်မရတော့ဘူးလား ။
ုနြူးကလီးယား ထက်ပြင်းတယ် သူမ
သူမ သူမ ဟာ နိုင်းမြစ်ဖြစ်တယ်
သူမ ဟာ ဓားတောင် နှင့် မီးပင်လယ်ဖြစ်တယ်
သူမ ဟာ 2012 ရုပ်ရှင်ဖြစ်တယ်
၀လုံး နဲ့ သုည ဘယ် ရစ် ညာ ရစ် မကွဲတဲ့ ကလေးငယ်လို သူမ ရဲ့ ဥပက္ခာ တောအုပ် မှာ
ကျွန်တော် အသက်ရှုမဝဖြစ်နေတာကြာပါပြီ ။နောက်တော့ ကျွန်တော်အသံက ပိုပို ငုတ်သွားခဲ့ရတယိ။
ဘယ်ဘက်ပါးက မှဲ့သေးလေးနဲ့သူမ က
လေးပါ ။့သူမ နွေရှုခင်းထဲက တမာပန်းရနံ့လေးပါ ။
သူမ ရှေ့မှာ ကြိုးတန်းလမ်းလျှောက် ပြကွက်ဆန်းများ လည်းစတန့်မထွင်ခဲ့ပါဘူး ။
`` ရှင် ကဘာမို့လို့လည်း..စာသားလေးကြောင့် ရှေ့ခုနှစ်ဘဝ နောက်ခုနှစ်ဘဝ ရူးခဲ့ပါတယ် ။
ကျွန်တော် က ပတ်ဝန်းကျင် လွှမ်းမိုးမှု လွယ်လွယ် နဲ ခံရတဲ့သူ ..သံပတ်ပေးထားတဲ့ နာရီလို အချိန်မှန်မှန် နာကျင်ရပါတယ် ။ တကယ်တော့ ကျွန်တော်ဟာ ပန်းနဲ့ပေါတ်ရင်တောင် သူမ
နာကျင်မှာ အသေစိုးရိမ်တဲ့ကောင်..။ ကျွန်တော် က ငါးမျှားချိတ်မှာ ဆတ်ဆတ်ခါအော်ဟစ်နေတဲ့ ပိန်ညောင်အမြီးပြတ်လေး ဆိုတာ သူမ သိအောင် မပြောခဲ့ပါဘူး ။
ဘုရားသခင် ဟာ သူမ ကို ကျွန်တော် ထက်ပိုပြီး ရယ်မောစေခဲ့ပါတာဝမ်းမြောက်စရာသတင်းစကားပါ ။ သူမ နဲ့ပက်သက်တဲ့ ပစ္စုပ္ပန်
သတင်းများဟာ ကျွန်တော် အတွက် ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ ဟီနိုရှီးမား မြို့လို နာကျင်ပြီး နာဂါစကီ လို အော်ဟစ်ရပါတယ် ။ သူမ သူမ သူမ ကြိုက်သော အရာများ သည် ကျွန်တော် ရူးသွပ်မှုများ ခိုနားရာဖြစ်သည် ။ သူမ ကြိုက်နှစ်သက်သော သင်္ကေတများသည်
ကျွန်တော် အတွက် ကဗျာများဖြစ်သည် ။
မြေပုံတစ်ခုရဲ့ တောင်ပိုင်းဟာ စက်တင်ဘာ ၂၁ ။ မြေပုံတစ်ခုရဲ့မြောက်ပိုင်းဟာ စက်တင်ဘာ ၂၆ ။ ၂၀၁၃ ဇွန်လ ၂၉
စပျစ်သီးဖျော်ရည် နဲ့ ဒိန်ချဉ်ခွက် ဟာ ငြိမ်းချမ်းရေး စာချုပ် မဟုတ်တာတော့ သေချာတယ် ။
၂၀၁၃ ဇွန်လ ၂၉ ဟာ Eureka မှလွင့်ကျသွား တဲ့တောင်ပံတစ်စုံပါ ။
၂၀၁၃ ဇွန်လ ၂၉ ဟာ မီးခိုးလို လူတစ်ယောက်ကို လိပ်ပြာတစ်ကောင်ရဲ့တောင်ပံခတ်သံက လွင့်စင်စေခဲ့တာပါ ။
လူတစ်ယောက်ရဲ့မာန ကို တိတ်ဆိတ်ခြင်းနဲ့ ထုတ်ပိုးပြီး သူမ ရဲ့ စကားပန်းရနံ့လို ရယ်မောသံဖွဖွလေးမှာ နူးညံ့စွာ သုံ့ပန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ် ။ လူသတ်သမားအပြုံးကို မျက်နှာဖုံးတပ်ပြီး သူမ ရဲ့ နွေရာသီစကားလုံးများ ပေါ်မှာ ကျွန်တော် အရည်ပျော် သေဆုံးခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော် ဟာ စကြာဝဠာ အပြင်ဘက်လွင့်စင်သွား သလိုခံစားရတယ် ။ ဝေးကွာခြင်းဟာ အဆိပ်တစ်ခွက်ဆိုရင် ကျွန်တော် မော့သောက်လိုက်ပါမယ် ။ ခွဲခွါခြင်းဟာ သူမ ဆန္ဒ ဆိုရင် စတင်ကျောခိုင်းလမ်းလျှောက်သူဟာ ကျွန်တော် မဖြစ်နိုင်ဘူး ။
ပွန်ပီမြို့စောင့်စစ်သား နဲ့ ဆိုကရေးတီး လို မိမိတန်ဖိုးထားသော ဘဝသစ္စာ ဂုဏ်သိက္ခာ အတွက်အသက်ကိုပေးအပ်ရဲ့တဲ့ သတ္တိကိုလေးစားတယ် ။ ကျွန်တော် ရူးသွပ်နေသော ခရမ်းပြာသစ္စာပန်းများ ပျောက်ဆုံးသွားပြီလား ။
သူမ တစ်ပါးသော ကောင်းကင်မှာ လွတ်လပ်စွာ ပျံသန်းနေပါတယ် ။
တယောက်က မျက်ရည် နဲ့ထမ်းပိုးလိုက်သလိုမျိုး ။
မကြားနိုင်သော အရပ် မှ
မကြားသင့်သော စကားလုံးများ ...
( ၁၀ )....
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမှ သူက လာလင်းတယ်။
သူ့လက်မောင်း ၀င်းဝါ၀ါ လေးကို ကွေးညှစ်ပြပြီး
သူဟာ အစွမ်းအစ ရှိသူပါတဲ့
သူ့ဖိတ်စင် ကျခဲ့တဲ့ အလင်းသဲ့သဲ့နဲ့ပဲ
ကိုယ်ကလည်း ရောင့်ရဲ နိုင်သူ
ကိုယ့်ကြယ်လေးလည်း လိုက်လာ ထွန်းလင်းခဲ့ပါ့မယ်
ဒီလို သူ ဆိုမှာပါပဲ
ကိုယ့်ကောင်းကင် မှာ သူ အမြဲရှိမယ်။
ညည်းလက်မောင်း ၀င်းဝါ၀ါ လေးကို
ကွေးညှစ် မပြ ပါနဲ့.... ကြယ်လေး
ကိုယ့်စကားကို သူ ကြားအောင်
ကိုယ် တိုးတိုးလေးပဲ ပြောချင်တယ်။
သူ့ ပါးပြင်ပေါ်က သနပ်ခါးပွင့်လေးကို
အဝေးကနေပဲ ကိုယ် တိုက်ခိုက်တော့မယ်
ကိုယ့်ဘ၀ကို လမိုက်ညတစ်ညလို ခံယူခဲ့တာကလည်း
အဲဒီနေ့မှာမှ ကြယ်လေးက ပိုပြီးထွန်းလင်းလို့ပဲ
သူရယ် ကိုယ်ရယ် ပြိုင်တူ လင်းလက် ဖို့
သူ့ရဲ့ ဆောင်းည တွေအတွက် ဂွမ်းစောင်ထူထူလေးလို့
ကိုယ့်မျက်ရည်တွေက သူရှိရာ ကောင်းကင်ဆီကို လွင့်မျော ပျံတက်လို့။
တောက်ပတဲ့ ကြယ်ပုံ ပန်းချီကားတွေကို
ကိုယ့်အခန်းနံရံမှာ သပ်သပ်ရပ်ရပ် ကပ်ထားမယ်
ကြိုးတန်းမှာ ကော်ရုပ် ကြယ်ပွင့်လေးတွေ ချိတ်ဆွဲမယ်
သူ့မွေးနေ့မှာ ငွေစက္ကူ အသစ်တွေနဲ့ ကြယ်ပုံ ချိုးပြီး
ကိုယ် ဒီလိုစဉ်းစား ထားပါတယ် ကြယ်လေးရယ်
ဘယ်လူသားက ကြယ်ပွင့်လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာမို့လည်း
လူသားကတော့ ကြယ်လေးကို ချစ်တာပဲလေကွယ်..။ Posted by
ကောင်းကင်ယံက ညို့တက်လာသော မိုးသားများကိုကြည့်ကာ တစ်ပါးသူရေးဖွဲ့ခဲ့တဲ့ စာသားလေးလို " ပြိုမှာလေလားလို့ " ပိုက်ထားမိတဲ့လက်ကလေးကို နေရာပြောင်းမိ ဒီကိစ္စဟာ တအားနူးညံ့တယ်။ ရွှေပလ္လင်မှာသူစံရမည်ဆို
သခင်တို့ရဲ ပလ္လင်နန်းမှာ စံမြန်းပါ ငါ့ထိပ်ထား
ထိပ်ထားရယ်…ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်…ဂန္ထ၀င် ပန်းပုရပုဒ်မှာ…နန်းသုံးအက္ခရာနဲ့ ခြယ်မှုန်းနင့်နာမည်လေး စာသုံးလုံးကိုစီရီသီကုံးပေးချင်တယ်…။
လေညင်းကလေးရေ…ငါ ချစ်မြတ်နိူးရတဲ့ ကမ္ဘာရဲ့ထိပ်ထားကိုသူ့ဆံနွယ်ခက်လေးတွေဖွားခနဲ လွင့်ဝဲသွားရုံတစ်ချက်လောက် အုံ့သည်း တိုက်ခတ်ပေးပါ…။လေစီးထဲမှာဖွာကြဲလှပနေရှာမဲ့သူ့ရဲ့ကေသာဆံမြကိုအဝေးကနေ…ရှိုက်မွှေး လွမ်းဆွတ်ပါရစေဦး။
ကိုယ့်ရင်တစ်ရိုး မိုးတွေ သဲသဲလှုပ်ရွာချတော့မယ် သတိရခြင်း တိမ်ခိုးတွေရယ်ပေါ့ သူတို့ ကိုယ့်စကားကို နားမထောင်ကြဘူး.. တစ်ခါတလေ ကိုယ့်အတ္တကိုယ်ပြန်ရှာမိတဲ့အခါ မသိစိတ်မှာရော အသိစိတ်မှာရော သူ့ပုံရိပ်တွေ ခပ်များများ ..
သူ့ကိုချစ်နေရတာလည်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် ချစ်နေတာပဲလေ
အဲဒီလိုအမြဲပြန်ပြောပြဖြစ်ခဲ့ နားလည်တတ်ဟန်ဆောင်ရင်း နားလည်တတ်လာတယ် သီးခံတတ်ဟန်ဆောင်ရင်း သီးခံတတ်လာတယ် ရောင့်ရဲတတ်ဟန်ဆောင်း ရောင့်ရဲတတ်လာတယ် သူမ့အပြုံးကိုမြင်ရင်တောင် ကိုယ်လိုက်ပြုံးမိတဲ့အတွက် ကိုယ့်အတ္တဟာ မင်းပါပဲ။
ပြာရော်သွေးဆုတ်သွားတဲ့အထိ မင်းနာမည်လေး အော်ခေါ်နေမိခဲ့တယ်။
အေးစက်စက် ကောင်းကင်ပေါ်က လ,နဲ့
ကိုယ်ကို အိပ်မက် ပေးမတဲ့
မင်းကို ငါ ချစ်ခဲ့
ဘ၀ကို ငါ မြတ်နိုးခဲ့
အစက်အပျောက် တစ်ခုက အရာမထင်သလိုမျိုး
သတိရခြင်းကို ငါ ပိုင်တယ်
ဟောဒီကမ္ဘာမှာ ငါ့အချစ်ဆုံး မိန်းမသားဟာ
မေမေနဲ့မင်း ပဲ...။ ။
ဆုမြတ်မိုး | အလေ့ကျပေါက်သောမြက်ရိုင်းတစ်ပင်
http://htarwayathitsar.blogspot.com. Template images by Jason Morrow. Powered by Blogger.